Sampandraharaha fanohanana - Ivontoerana fampianarana fiteny roa
Home Anglisy ho an'ny mpitsoa-ponenana, Asylees, SIV, ary iharan'ny fanondranana olona an-tsokosokoSerivisy fanohanana
Amin'ny maha olom-baovao anao any Etazonia, ny fianarana anglisy dia manampy amin'ny fampifandraisana anao amin'ny tranonao vaovao sy ny fiarahamoninao vaovao. Ny tanjonay ao amin'ny BEI dia ny hanampy anao hahatratra ny nofinofy amerikana anao ary handresy ireo sakantsakana amin'ny fanomezana anao ny fitaovana iray matanjaka indrindra - serasera. Mampianatra anao izahay ny anglisy izay ilainao ho an'ny fiarahamonina sy ny asa. Raha toa tsy tena misy ny hevitra ny maka kilasy anglisy, dia diniho ny tolotra fanohanana omenay hanampiana anao hahatratra ny tanjonao.
Torohevitra momba ny fanabeazana:
Mety hahatafintohina ny fitadiavana asa, indrindra raha vao any Amerika ianao. Ilay Mpanolotsaina ho anay Mpampianatra eto dia hanampy sy hanampy anao hamita ny dingana hanatanterahana ny làlanao amin'ny asanao. Indraindray dia midika hoe manohy ny fiainanao ela any Etazonia eto. Ny fotoana hafa dia midika hoe mitady tanjona kendrena vaovao. Ny serivisy momba ny toro-làlana momba ny fikarakarana karatra dia afaka manampy amin'ny famaritana ny fotoana fanazaran-tena, ny famerenana indray ny fampianarana, ny kilasy amin'ny fiteny anglisy, ny fahaizan'ny asa ary ny maro hafa!
Translation / fivoasana
BEI dia manolotra ny fitaizana ankizy mandritra ny fotoam-pianarana, mba hahafahan'i Neny sy i Dada mianatra ny teny anglisy kanefa ny zaza nitaizana.
BEI mety ho mpamatsy fiteny ianao, saingy fantatrao fa afaka manampy anao hahita loharano hafa ao amin'ny fiarahamonina izahay? Amin'ny maha mpianatra anao ao amin'ny BEI, ampahan'ny tambajotra fanohanana lehibe ianao. Aza misalasala manontany anay fanontaniana. Azontsika atao ny miantso anao amin'ireo mpamatsy ny mpitsoa-ponenana mpitsoa-ponenana hafa ho fanampiana fanampiana, filàna trano, fanomanana GED, sns. Izahay dia namolavola ny tambajotra an-tserasera koa. Aza adino ny hihaona amin'ny Mpanolo-tsaina momba ny mpianatra BEI raha te hahalala bebe kokoa.
Mpianatra amin'ny fiteny daholo isika rehetra ary fantatsika ny fahatsapana ho tonga mpianatra mianatra. Amin'ny fotoana ilana azy dia afaka manampy anao amin'ny fitenin-drazanao ireo mpiasa sy mpampianatra isan-karazany. Manana fanohanana amin'ny fiteny Arabo, Shinoa, Farsi, French, Hindi, Alemanina, Gujarati, Japoney, Kazakh, Kinyarwanda, Kirundi, Koreana, Kurta, Portogey, Punjabi, Rosiana, Rosiana, Serbo-Kroasia, Pashto, Espaniola, Swahili, Tagalog , Tiorka, Urdu, Vietnamese ary Yoruba.
Rehefa mifindra any amin'ny tanàna vaovao ianao, indraindray dia mila mianatra ny arabe ary milamina mikaroka. Noho izany antony izany, dia manolotra ny ankamaroanay kilasy eo akaikin'ny tranonao ianao, amin'ny toerana mora aleha. Raha mahazo aina amin'ny fitateram-bahoaka ianao, dia mety haka kilasy iray ao amin'ny campus. Ny tapakila fitateram-bahoaka no misy ny mpianatra mankany BEI, raha ilaina izany.
Mangataka ny zom-pirenena amerikanina?
BEI dia manampy ny momba ireo mpanjifa mendrika ho an'ireo taranja fanomanana ara-dalàna maimaimpoana ao Etazonia amin'ny CCT Houston.
Ny kilasy dia ho an'ny mpianatra anglisy ary mifantoka amin'ny fanomanana ireo mpianatra amin'ny dinidinika naturalisation, anglisy sy ny fanadinana Civics / Tantara Amerikana. Ampiharo ny dinidinika, ny fitsapana ary fantaro ny Anglisy ilaina hahomby. Ny mpitafita mahomby dia mahazo fidirana amin'ny fanampiana ara-dalàna sy ny fisoloan-tena ho an'ny fizotrany ara-boajanahary avy amin'ny Charity Katolika.
Mifandraisa amin'ny cynthia@ccthouston.org
Mangataka fampahalalana bebe kokoa momba ny fianinan'ny olom-pirenena momba ny zom-pirenena
Mba manorata, azafady fa tena misy ianao
Manolo-tena miaraka aminay!
Ny sehatry ny fianarana teny anglisy dia sehatra tena eran'izao tontolo izao misy fotoana hiarahana amin'ireo kolontsaina samihafa ao an-trano na mitsangatsangana fampianarana maneran-tany sy hihaona amin'ny olona vaovao. Na liana amin'ny fampianarana any an-trano na mandeha any ivelany ianao dia afaka manampy anao amin'ny fampiofanana ilaina mba ho tonga mpampianatra teny anglisy matihanina ny BEI.
Ny programa fanofanana mpampianatra mpirotsaka an-tsitrapo dia natao hanampiana ireo kandidà ho tonga mpampianatra teny anglisy nahomby amin'ny fanomezana:
Hevitra sy teknika fototra ho an'ny fampianarana anglisy anglisy mahomby.
Fomba fampianarana no enti-manentana ny mpianatra amin'ny sokajy sy taona rehetra.
Ny fitantanana ny fotoam-pianarana sy ny teti-drafitry ny lesona momba ny ambaratonga samihafa.
Fanao farany indrindra ao amin'ny paikady EL Trends, Fampifangaroana ary paikady fifandraisana.
Traikefa momba ny asa azo ampiharina ho an'ireo mpampianatra EL vaovao liana amin'ny fampianarana any an-trano sy any ivelany.
Ka raha mieritreritra karama amin'ny fiteny Anglisy ianao dia mila mamita ny fomba fiasao, na te hitety toerana sy hiasa manerana an'izao tontolo izao, mifandraisa amin'i BEI hanomboka ny asanao EL.
Mpiasa an-tsitrapo anio!